Magetsi accumulator: zvavari, zvavari uye mhando | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 06/04/2022 12:00 | Kumba Economics
Un magetsi accumulator Icho chigadziro chinotevera nheyo imwechete sesero kana bhatiri. Sezvinoratidzwa nezita racho, chinhu chinokwanisa kuunganidza nekuchengetedza simba, iro rinogona kushandiswa kwenguva inopfuura kana shoma mushure. Zvinoenderana nekuti simba rinochengetwa sei uye rinoshandiswa sei. Izvi zvinoreva kuti kune kwete chete accumulators, anogona zvakare kupisa, angave emagetsi kupisa accumulator, pneumatic, hydraulic kana magetsi kana mechanical mvura accumulators.
Muchikamu chino tichakuudza kuti chii chinonzi accumulator yemagetsi, maitiro ayo ndeapi uye kuti ndeyei.
2 Mhando dzemagetsi accumulator
3 Chii chinonzi accumulator yemagetsi?
4 Maintenance mabasa
Accumulator yemagetsi mudziyo unoshanda sesero kana bhatiri. Yakagadzirirwa kuchengetedza uye kuunganidza simba rinogona kushandiswa gare gare. Inogona kushandiswa kwenguva yakawanda kana shoma zvichienderana nenzvimbo yekuchengetedza uye kuti simba rakachengetwa rinoshandiswa sei. Ramba uchifunga kuti kune marudzi akasiyana emabhatiri, saka imwe kana imwe inogona kudikanwa kune imwe neimwe mamiriro.
Basa rayo guru nderekuita kuti chimwe chigadziri chishande kuburikidza nesimba rakachengetwa, saka chine zvakawanda zvakasiyana-siyana zvekushandisa. Semuenzaniso, muzvivako zvekambani, zvinonyanya kuzivikanwa ndezvekuva nemabhatiri makuru anochengetedza uye anoparadzira magetsi kuburikidza nematunhu akasiyana.
Imwe neimwe mhando yemagetsi accumulator inoshanda zvakasiyana zvichienderana nerudzi rwesimba umo simba remagetsi rakachengetwa richashandurwa, asi vose vane zvimwe zvakafanana. Chiripo ndechekuti accumulator inochengeta simba yozoishandura kuita imwe mhando yesimba rekushandisa. Semuenzaniso, magetsi ekupisa accumulators anoshandiswa kupa kupisa kwemagetsi kune zvivakwa kuburikidza nemagetsi radiators.
Mhando dzemagetsi accumulator
Kune akati wandei marudzi emagetsi accumulator. Ngationei kuti ndezvipi:
Photovoltaic accumulator: Solar panel inounganidza simba kubva mumwaranzi yezuva yoichengeta mutangi rokuchengetera rakagadzirirwa. Iri simba rinogona kushandiswa chero nguva yemasikati kana husiku pasina kuwana yekunze network kuti ugone kuisirwa yako yekutengesa.
Magetsi kupisa accumulators: Izvo zvinoshandiswa kupisa zvivako nemagetsi emagetsi. Thermal accumulators anoshandisa magetsi kugadzira kupisa, iyo inobva yagoverwa kumakamuri ose. Imwe yemabhenefiti ayo akatanhamara ndeyekuti inopisa nekukurumidza kupfuura mamwe maturusi.
Magetsi accumulator: Hita inoshandisa magetsi kukwidza kupisa kwemvura mutangi. Mvura inopisa nokudaro inopinda munharaunda yepombi uye inosvika papombi dzose dziri mumba.
Chii chinonzi accumulator yemagetsi?
Chinangwa chemabhatiri ekuchengetedza magetsi ndechekuita chimwe chigadziro kana chigadziro kushanda nesimba rakachengetwa, izvo zvinoreva kuti vane mabasa akawanda uye kushandiswa. Iwo mabhatiri madiki anogona kugonesa midziyo midiki senharembozha. Asi makuru anogona kubata motokari nezvimwe zvinhu zvikuru.
Mumba, kushandiswa kwemabhatiri zvakare kwakasiyana. Muchiitiko ichi, tiri kutaura pamusoro pemidziyo mikuru yakagadzirirwa kuchengetedza uye kugovera magetsi kuburikidza nematunhu akasiyana-siyana mumba.
Kushanda kwebhatiri kunoenderana zvakanyanya nerudzi rwayo. Mumwe nomumwe wavo anotevera nheyo dzayo, zvichienderana nerudzi rwesimba umo simba remagetsi richashandurwa. Zvisinei, pamusoro pebasa ravo, vose vanotevera matanho mashomanana.
Chinokosha kune magetsi accumulator ndiko kukwanisa kwayo kuchengetedza simba. Inoichengeta kuti gare gare ichishandure kuva imwe mhando yesimba. Nokudaro, magetsi anoshandurwa kuva simba remakemikari, iro rinochengetwa kusvikira radiwa uye rinoshandurwa kudzokera kusimba remagetsi kuti rishandiswe.
Tichitora muenzaniso wekushanda uku, tinogona kusvika kune yakajairika mhando yekuunganidza mumba, yemagetsi kupisa accumulator. Saka, zviri nyore kunzwisisa kuti bhatiri rinoshanda sei. Muchiitiko ichi, magetsi emagetsi anowanzoshandiswa kupa kupisa kwemagetsi kumba.
Naizvozvo, yemagetsi accumulator radiator inoshandisa yakaunganidzwa simba remagetsi kupisa chidimbu checeramic kana aluminium., uye kubva ipapo ichisvika kumakamuri ose eimba. Nyaya yacho inogona kuchengetedza kupisa, saka simba rinogona kushandiswa kwenguva yakareba. Kiyi yekuziva chaizvo bhatiri rakanakira bhizinesi rako kunzwisisa chinangwa chayo chaicho.
Kashoma kuti bhatiri rimire kushanda, asi midziyo iyi haina kupusa. Panyaya yemagetsi accumulator kana chero imwe mhando yekutadza, chinhu chekutanga chekutarisa inzira yekunze yekubuda kunooneka. Kunyangwe iyo yakawanda yekukundikana mune izvi zvinhu inowanikwa mukati. Pamusoro pekuvuza kwemukati, kune zvimwe zvinowanzoitika zvikanganiso senge zvakatyoka resistors kana kukuvara sedunhu.
Mhosho dzese idzi dzakakomba zvekuti nzira chete yekuzvigadzirisa ndeyekufonera nyanzvi yehunyanzvi. Usamboedza kushandisa matipi kugadzirisa bhatiri remumba, sezvo ungangowedzera kukanganisa uye mhedzisiro inogona kuve njodzi.
Midziyo iyi inogona kukurudzirwa kune chero munhu. Kunyanya kukosha, kune avo vanoda kuwedzera simba ravo rezuva nezuva rekuchengetedza. Naizvozvo, bhatiri rinoshandiswa kuwedzera chiyero chekusarura kweawa. Shandisa nguva yemutengo wakaderera wemagetsi kuti bhatiri richajise matura aro. Kusunungura simba rakachengetwa mukati mezuva. Mabhatiri zvinhu zvine akawanda mabhenefiti mukuisa mudzimba. Zvinoenderana nerudzi rwaunoda uye zvauri kuda kuwana nekuishandisa.
Chero ani, mune chero imba, anogona kudziisa. Zvose izvi zvichatibvumira kuchengetedza simba uye kuderedza magetsi kana gasi mabhiri pakupera kwemwedzi nenzira yedu. Semuenzaniso, kana tiine gasi kana mafuta ekudziya, tinogona kuisa hita yemvura, kana radiator yemagetsi, tinogona kushandisa magetsi kupisa mvura kana radiator, pane kushandisa gasi boiler, aya accumulators anosarudzwa. Vamwe vanhu vanozvichengeta kumba, asi vamwe vanopokana nazvo, vachisarudza kushandisa gasi kana dizeli boilers kupisa mvura nemaradiyeta. Zvose zvinonyatsoshanda.
Zvisinei, kana tine simba rekugadzira simba rezuva mumba medu, zvinokurudzirwa kuisa photovoltaic mabhatiri. Izvi zvichatibvumira kuchengeta simba sebhatiri, uye patinogadzira backup, tinogona kuishandisa pasina zuva, senge husiku. Kana isu patinenge tiine kudiwa kwakanyanya uye tisingadi kutsamira pane network.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve iyo magetsi accumulator uye kuti ndeyei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » magetsi accumulator